Fursadaha Uurka Mataanaha - Hablaha Media Network
HMN:- Mataano waa marka caloosha hooyada ay wada galaan in ka badan hal cunug. Mataanuhu waxay ka kooban yihiin labo qeybood oo kala ah mataano ka samaysmay hal ukun iyo kuwo ka samaysmay labo ukun.
Dumarka caadada u hela sida joogtada ah waxay soo deyaan hal ukun bil kasta, ukuntaas haday bacrimin heli weydo dhiiggii caadada ayay noqotaa. Ukun kasta waxaa gala hal xabbo oo manida ragga ah.
Inkastoo ay mataanuhu yihiin qadarta Rabbi, haddana waxaa jira arrimo saamayn ku yeesha uurka mataanaha waxaana ka mid ah.
Hiddaha: hadii aad tahay mataan ama qoyskaaga ay ku jiraan mataano waxaad dhici kartaa inaad dhaxal u hesho inaad mataano dhashid.
Da’da: Hadii da’daadu weyn tahay waxaa badanayaa fursadahaaga uureysiga mataanaha. Dumarka 35 jirka ah ama ka weyn waxay soo deeyaan hormoonka loo yaqaan FSH (follicle-stimulating hormone) in ka badan kuwa da’adaas ka yar.
Hormoonkaan FSH waxaa uu caawiyaa in ukuntu ay baaluqdo, sidoo kale dumarka soo daayaa FSH dheeraad ah waxaa laga yaabaa inay soo daayaan in ka badan hal ukun halkii mar. Dumarka 35 ka weyn ee bilaabay inay wax dhalaan waxaa bata fursadahooda dhalmada mataanaha.
Mataano hore: Hadii aad horay mataano u dhashay waxay u badan tahay inaad mataane kale dhashid mustaqbalka.
Muuqaalkaan Waxaa soo jeedinaynaysa Ubahiina Muuse Waxayna si fiican u sharraxaysaa uurka mataanaha.